केपी ओलीको बिरोध गरेर नथाक्ने बिरोध खतिवडाले सार्वजनिक रुपमै गरिदिए यस्तो घोषणा, माधव नेपाल ठुलो तनावमा ! – GALAXY
केपी ओलीको बिरोध गरेर नथाक्ने बिरोध खतिवडाले सार्वजनिक रुपमै गरिदिए यस्तो घोषणा, माधव नेपाल ठुलो तनावमा !
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका का एक नेताले चुनावमा एमालेभन्दा आफ्नो पार्टी ठूलो नभए राजनीतिबाटै सन्यास लिने घोषणा गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेता विरोध खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
उनले भने,‘ हेर्नुहोला, आउने चुनावमा केपीको पार्टीभन्दा हाम्रो पार्टी ठूलो हुन्छ, एमालेभन्दा आफ्नो पार्टी ठूलो नभए राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु’। उनले ओलीले झापामा चुनाव हार्ने डरले राप्रपासँग गठबन्धन गरेको पनि आरोप लगाए ।
उनले भने,‘ जो मान्छेले झापाको एउटा सिट छोडेर राप्रपाको १५ हजार मत थपेर चुनाव जितेर आयो, त्यो मान्छेले आज यत्रो फुर्ती ? न माधव नेपालले राप्रपासँग एकता गरे, न विरोध खतिवडाले गर्यो ? न रामकुमारी झाँक्रीले गर्नुभयो ?
२०६४ सालमा केपी ओली, झापाको दमकमा पाखामा भ्यागुतो पछारिएर उत्तानो टाङ लागेको मान्छे, सबभन्दा लोकप्रिय र राष्ट्रवादी नेता उत्तानो टाङ, तर मैले त २०४८ सालदेखि लगातार चुनाव जितिरहेको छु । अबको चुनावमा पनि मलाई फलामको चिउरा हुँदैन् ।’